မန်းကိုသတိရတဲ့အခါ….	March 19, 2009
ဟိုနေ့က ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်တော့ မန္တလေးရောက် တုံးကပုံတွေတွေ့မိတာ မန္တလေးကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ ကျွန်မက နာဂစ်ကို ကြံကြံဖန်ဖန်လွဲချင်တော့ နာဂစ်ကာလမှာ မန္တလေးလို အပူပိုင်းဇုံမှာ အပူတွေကန် မိတ်တွေပေါက်ရင်း လျှောက်သွားနေရတဲ့ အဖြစ်ပေါ့ . . . . . .😀
ရန်ကုန်နဲ့ တခြားနေရာက မိတ်ဆွေတွေဖို့ပေးတဲ့ နာဂစ်သတိပေးချက် Email တွေဖတ်ရတုံးက နာဂစ်ကို သိပ်မထင်မိဘူး။ ဒါပေမဲ့ မေလ ၄ရက်နေ့ ရောက်တော့ ရန်ကုန်ကို ဖုန်းဆက်မရတော့ဘဲ နောက်ထပ်သတင်းတွေ ကြားတော့မှ မုန်တိုင်းဒဏ်တော်တော်ခံလိုက်ရတာ မှန်းမိတယ်။ အိမ်ကို စိတ်ပူလို့ အမြန်ပြန်ချင်ပေမဲ့ ကားလက်မှတ်တွေက ၀ယ်မရဘူး။ လမ်းခဏပိတ်တယ်ဆိုလား။ နောက်ဆုံး (၇) ရက်နေ့ ပြန်ဖို့လက်မှတ်ရတော့ စစ၀ယ်ဈေးက မန္တလေး – ရန်ကုန် လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ၁၂၀၀၀ကျပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကားပေါ်ရောက်မှ ၃၀၀၀ စီထပ်တောင်းလို့ ခရီးသည်အားလုံး မကျေမနပ် ပေးခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကားပေါ်ရောက်နေပြီကိုး။ ဆီဈေးတွေတက်တာ ကျတာတော့ သိပ်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကတော့ မရှိသင့်တာ အမှန်ပါပဲ။ အိမ်ပြန်ခရီးကို ဆက်ရေးရင်တော့ နာဂစ်မြင်ကွင်း တစိတ်တဒေသဘဲ ဖြစ်သွားတော့မယ်။ ဒါကတော့ စစချင်း သတိရသွားတဲ့ မန္တလေးခရီးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တွေးမိတာလေးတွေပါ။
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ |6Comments »Tags: Mandalay
cuttiepinkgold Says:	March 20, 2009 at 11:43 am အမ…
Reply	kalyar Says:	April 10, 2009 at 12:09 pm ကျေးဇူးပါပဲ cuttiepinkgold ရေ…နောက်ကိုလည်းအကြံပြုပေးဦးနော်
Reply	လင်းပြာနွေ Says:	March 28, 2009 at 1:52 pm ငါ့ကို နင်လွမ်းအောင်လုပ်နေတာလား.. ငါပြန်လာခဲ့မယ် စောင့်နေ.. ပြီးရင် ငါတို့နှစ်ယောက် ထပ်ဒိုးကြမယ်.. ဒီခါ နယ်မြေသစ်တွေဆီသွားမယ်.. ချစ်တဲ့
Reply	ဂျေဂျူဝိုင် Says:	April 21, 2009 at 10:32 am ဟမ်… မန်းအကြောင်း ကွန်းမင့်ပေးသူတွေကလည်း ဘယ်လိုပေးသွားကြတာတုန်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မန်းဟာ မေ့လို့မရတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပဲဆိုတာ မန်းမှာ နေဖူးပြီး မန်းကို ခွဲသွားကြတဲ့ သူတွေအားလုံး သိကြတယ်နော်
Reply	ကုမ်ရာသီသူ Says:	April 25, 2009 at 6:28 am ဟိုဟိုဒီဒီ ရေးတတ်တာချင်းတူတဲ့ ညီမလေး။ ဖော်တော်ဦးကို ရောက်ခဲ့တယ်လား။ အဲဒီမှာ ကျွန်မနဲ့ ခင်ခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေသေးရဲ့လားတော့ မသိပေမယ့် ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ မြင်ရ၊ ကြားရတိုင်း သူတို့ကို သတိရနေမိတယ်။ မှတ်မှတ်သားသား ရှိတတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ မန္တလေးရဲ့ ကာလတစ်ခုက မှတ်တမ်းပေါ့လေ။ ခင်မင်လျက်
Reply	ဇော်ဆိုင်းအောင် Says:	September 1, 2009 at 11:59 am မကလျာ…